မန်းရေနံမြေနှင့် MPRL E&P Pte. Ltd. တို့မှ ဆောက်ရွက်နေသည့် လုမှုတာဝန်သိမှု(CSR)လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍(၃)လ တစ်ကြိမ် ရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ ~ Myaylatt Daily.
မန်းရေနံမြေနှင့် MPRL E&P Pte. Ltd. တို့မှ ဆောက်ရွက်နေသည့် လုမှုတာဝန်သိမှု(CSR)လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍(၃)လ တစ်ကြိမ် ရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ
8:58 AM သတင်း No comments
မင်းဘူး မေ ၂
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၊ မန်းရေနံမြေနှင့် MPRL E&P Pte. Ltd. တိှု့လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောက်ရွက်နေသည့် လူမှုတာဝန်သိမှု(CSR)လုပ်ငန်းများ နှင့်ပတ်သက်၍ (၃)လ တစ်ကြိမ် ရှင်းလင်းပွဲကို မေလ(၂) ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီ အချိန်က မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးမြို့၊ မန်းရေနံမြေစုပေါင်းရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အစည်းအဝေးတွင် မန်းရေနံမြေမှ အထွေထွေမန်နေဂျာဦးရဲနိုင်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး၊ MPRL E&P Pte. Ltd မှ Community Investment Team Leader CI TL ဦးဆိုင်မွန်က ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၊ မတ်လများအတွင်း ရေနံမြေနှင့် ထိစပ်ကျေးရွာများ MPRL E&P Pte. Ltd မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် CSR လုပ်ငန်းများနှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍားရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ရန်လျာ ထားသည့် လုပ်ငန်းများအား ရှင်းလင်းတင်ပြ ခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ခရိုင်/မြို့နယ် အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် မန်းရေနံမြေ မှ တာဝန်ရှိသူများက MPRL E&P Pte. Ltd မှ Monitoring & Evaluation Officer ဦးစောအယ်စာဘလုထူးအား သိရှိလိုသည့်လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ရှင်းလင်းပွဲသို့ တိုင်းဒေသကြီး(၁)လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်စွမ်းရည်၊ တိုင်းဒေသကြီး (၂)လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ငွေ၊ ခရိုင်ဒုတိယအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်ဇေယျ၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသိန်းဇော်ကံ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့် မန်းရေနံမြေမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။